Gaa na Ibiza naanị euro 8 - Echefula na onyinye a! | Akụkọ Njem
Susana godoy | | Ibiza, Mgbidi
Gaa na Ibiza maka naanị 8 euro, ọ bụ nnọọ atụmatụ. N'ihi na ọ bụ eziokwu na oge ụfọdụ anyị nwere ike ịchọta ezigbo onyinye, mana ikekwe nke a karịrị ha. Flightgbọ elu na-efegharị efegharị maka ọnụahịa a na-apụghị ịgbagha agbagha na otu n'ime ebe ndị njem nleta ahụ ebe ha dị.
Nke ahụ, Agwaetiti Ibiza Ọ na-ahapụ anyị ma coves na ndị ọzọ na ọtụtụ ebe ndị ọzọ nwere mmasị. Ọ bụrụ na ị zutebeghị ya, ma eleghị anya ọ bụ ohere zuru oke. Ma na njedebe nke Septemba na Ọktọba, ị nwere ike ịnụ ụtọ ọnọdụ okpomọkụ kachasị mma. N'agbanyeghị ebe ị lere anya, ọ bụ nnukwu njem!
1 Njem njem ụgbọ elu na-aga Ibiza
2 Ebee ka m ga-anọ na Ibiza?
3 Ihe ị ga-ahụ na Ibiza
3.1 Nleta Dalt Vila
3.2 Ọ bụ Vedrá
3.3 Nwere ike Marça Cave
3.4 Chọọchị Santa Eulalia
3.5 Nwee ọdịda anyanwụ
Njem njem ụgbọ elu na-aga Ibiza
Flightgbọ elu ahụ si Madrid kwalite. Ihe a na-ahụkarị ma a bịa na onyinye dị ka nke a, nke na-ahapụkarị ọdụ ụgbọ elu Madrid ma ọ bụ Barcelona. N'agbanyeghị nke ahụ, anyị na-eche ihu a tiketi njem gbara agba maka euro 8. Ọzọkwa, anyị nwere nhọrọ ole na ole ịhọrọ site na. Nke ahụ bụ, ọpụpụ nwere ike ịbụ n'isi ụtụtụ ma ọ bụ n'ehihie. Ọ bụ ezie na nloghachi ga-enwe naanị otu nhọrọ na oge.
Ga-eso ụlọ ọrụ Ryanair fee. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhọrọ ụlọ ọrụ ndị ọzọ, ị nwekwara onyinye dịnụ nke ị nwere ike ịchọta maka ihe dị ka euro 6 karịa ọnụ. Anyị ga-echekwa njem a nke anyị ga-esi na Septemba 30 wee laghachi na Ọktọba 5. Yabụ, anyị ga-enwe oge ịnụ ụtọ ebe dịka Ibiza. Dịla njikere?. Ọfọn, ị nwere ike ime ndoputa gị ugbu a eDreams.
Ebee ka m ga-anọ na Ibiza?
N'ezie, nhọrọ dị ọtụtụ. Mana ịhụ ihe tiketi ahụ na-efu anyị, anyị achọghị ịfefe ya na ebe obibi. N'ihi ya, anyị ahọrọla ụfọdụ ụlọ. N'ihi na ọ na-adị mma mgbe niile, ọ bụrụ na anyị esoro ndị mmadụ. N'okwu a, idolọ Lido na-enye anyị ọnụahịa nke 378 euro maka abalị ise ma maka mmadụ abụọ. Ha nwere kichin nke nkiti ma di nso na Castle nke Ibiza. Detuo ha na Lọ nkwari akụ.com.
Anyị nwere ọtụtụ ụbọchị iji gaa IbizaN’ihi ya, anyị ekwesịghị ịna-echegbu onwe anyị banyere oge. Ihe kachasị mma bụ ịhazi ma anyị ga-enwe ezumike. Mana ka anyị hapụrụ ụfọdụ saịtị dị mkpa ị ga-ahụrịrị ma ọ bụ mee. Maka na mgbakwunye na nnọkọ oriri na ọ theụ ofụ ahụ, enwekwara nhọrọ ndị kwesịrị ekwesị ị na-eche.
Nleta Dalt Vila
O doro anya na ọ bụ otu n'ime isi ihe ị ga-atụle. Ọ bụ ihe gbasara elu akụkụ nke ebe akụkọ ihe mere eme. O nwere mgbidi mgbe ochie, nke e wuru iji chebe obodo a site na mwakpo ndị Turks. N'ebe ahụ ị nwere ike ịnụ ụtọ akwa mmiri Rom, drabridge na ọnụ ụzọ ámá ya.
Ọ bụ Vedrá
Dịka anyị nwere ọtụtụ ụbọchị, anyị nwekwara ike ịga leta agwaetiti ahụ, Ọ bụ Vedrá. Ọ dị nso na Ibiza, na mpaghara zuru oke nke gwụchara n'echiche. Site na ya, echiche dị ịtụnanya, mana ọ bụghị naanị nke ahụ, mana ha na-eweta udo. Ya mere, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na ọ bụrụ na ike gwụrụ gị ịga ije ma ọ bụ ịga ebe na-enweghị ịkwụsị, nke a bụ ezigbo atụgharị uche.
Nwere ike Marça Cave
Cave ga-ahụ ọgba na obodo, Sant Miquel, n'ebe ugwu nke agwaetiti ahụ. Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kacha mkpa mere eme ncheta. Maka na o nwekwara ọtụtụ afọ. Ndị bi na ya bụ ndị ahịa, ma taa, ọ bụ ebe ọzọ ị na-agaghị echefu njem gị.
Chọọchị Santa Eulalia
Ọzọ nke kasị nwee ọchịchị na agwaetiti ahụ bụ Santa Eulalia Des Riu. N’ebe ahụ, ị ​​ga-anụ ụtọ ụlọ ụka ewusiri ike. Ọzọ nke ebe ị ga-ahụ ọtụtụ ihe nzuzo na na-adịghị tụkwasịrị.
Nwee ọdịda anyanwụ
Gaghị echefu ọdịda anyanwụ mara mma. Maka nke a, ị nwere ọtụtụ akụkụ nkuku gị ma otu n'ime ha nwere ike ịba Sant Antoni de Portmany. A maara ya n'ihi na onye ọ bụla na-ekwusi ike na ọ bụ otu n'ime isi ebe anyanwụ na-atọ ụtọ karị. Anyị ga-ahapụ obi abụọ!.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Mgbidi » Gaa na Ibiza maka naanị 8 euro
Mallo de Riglos
Atụmatụ maka izu ụka dị ka di na nwunye